"नरसिंगा" का संशोधनहरू बिचको अन्तर - विकिपिडिया
"नरसिंगा" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
नरसिंगा (सम्पादन गर्ने)
१३:५१, १३ नोभेम्बर २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन
१ बाइट हटाइयाे , ५ महिना पहिले
(GR) File renamed: File:Ransingha (नरसिंगा),alarge curved trumpet from Nepal.jpg → File:Narsinga (नरसिंगा),alarge curved trumpet from Nepal.jpg Criterion3(obvious error) · I cropped an uploaded image and labeled thisaRansingha (नरसिंगा). However, after looking through3books of Nepali musical instruments, I know this should be labeled Narsinga नरसिंगा, which is what the Nepali text pronounces.
०८:४७, २९ अक्टोबर २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
Jacqke (कुरा गर्ने • योगदान)
१३:५१, १३ नोभेम्बर २०२० जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
Fridolin freudenfett (कुरा गर्ने • योगदान)
सा ((GR) File renamed: File:Ransingha (नरसिंगा),alarge curved trumpet from Nepal.jpg → File:Narsinga (नरसिंगा),alarge curved trumpet from Nepal.jpg Criterion3(obvious error) · I cropped an uploaded image and labeled thisaRansingha (नरसिंगा). However, after looking through3books of Nepali musical instruments, I know this should be labeled Narsinga नरसिंगा, which is what the Nepali text pronounces.)
[[File:RansinghaNarsinga (नरसिंगा),alarge curved trumpet from Nepal.jpg|thumb|नरसिंगा]]
'''नरसिंगा''' [[पञ्चैबाजा]] समूहको मुख्य बाजा हो । यो अर्को बाजा [[कर्नाल]] जस्तै हो । यो बाजा मुखले फुकेर बजाइन्छ । यो [[तामा]]को पातलो पाताबाट बनेको हुन्छ । यो झण्डै अर्धचन्द्राकार हुन्छ । यस बाजाको स्वर निस्कने भाग ठूलो र फुक्ने भाग सानो हुन्छ । यसको आवाज भने कर्नालभन्दा ठूलो र तीखो हुन्छ । नरसिंगा पाँच मुखेदेखि सात मुखे सम्मको हुन्छ । नरसिंगालाई [[धुत्तुरी]] पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/950133" बाट अनुप्रेषित